Ihe niile gbasara ụgbọ elu (Delichon urbicum), taabụ na ndetu - Ikkaro
Inicio >> Nature >> Planegbọ elu na-adịkarị (Delichon urbicum)
Ọ bụ nnụnụ na-akwagharị oge ọkọchị (site na Eprel ruo Ọktọba). Obi siri anyị ike na ụmụ mmadụ. Nke ezinụlọ Hirundinidae dị ka ilo. Dịtụ obere-sized passerines na ogologo, kapịrị ọnụ nku. Nnukwu ọnụ nke ha ji achụ nta ahụhụ, obere onu okuko na ụkwụ dị mkpụmkpụ.
A na-emegharị ha ka ha biri na mbara igwe. Mee ụlọ apịtị dị na kọntaktị, ma mechie dị ka ilo.
A na-agbaghakarị ya na-eloda, ọbụna na swifts.
Na-echere onyinyo nke akwụ
Otu esi amata ugbo elu
A na-amata ya site na eriri dị ọcha, ya na akụkụ ojii ndị ọzọ. Ọdụ ahụ dị mkpụmkpụ na oji, gbagoro ma na-enweghị ndọtị. Ndị fọdụrụ n'ahụ ahụ nwere oji na-acha anụnụ anụnụ na okpueze, uwe na scapulars.
Hiskwụ kpuchiri ụkwụ ya na nku ojii
Cuablanca Oroneta na Catalan,
Ortlọ Northen Martin na Bekee.
Enwere ike ịmata ha site na abụ ha, nke anyị hapụrụ n'okpuru.
Jens Kirkeby, XC381988. Nweta na www.xeno-canto.org/381988.
Kedu ihe ha na-eri
Ha na-eri ụmụ ahụhụ na ọkwa niile ha na-achụ nta mgbe ha na-agba ọsọ. Ha bụ ezigbo njikwa nke pests dị ka anwụnta.
Otu esi zere imebi mbara ihu
Otu n’ime nsogbu nnụnụ ndị a bụ unyi. Ihe nile foduru n’okpuru akwụ ha juputara na nsị. N'ihi nke a ha na-ahụ mgbe niile ka esi bibie akwụ ha.
Iwepu akwu ugbo elu ma obu iku akwu bu mpu ojoo. Emela ya. Kporie ndụ. ma ọ bụrụ na ị chọghị unyi ha na-ere ndị a trays maka nsị. I nwekwara ike ime ulo. See hụrụ na ọ dị mfe. Na ị ga-etinye ha site na Mee ruo Ọktọba. Mgbe ahụ i nwere ike wepu ma hichaa ha.
Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ndị ọchịchị ejiri ha mee ka okporo ụzọ dị ọcha
Ofbọchị ịhụ ụzọ na Sagunto
Whenbọchị mgbe m hụrụ swif ndị mbụ na mgbe ha lara.
Afọ Ribọchị mbata
Ihe ngosi 2019 bu mmalite, abuo abuo n’ime akwu post n'okporo ámá, mana o were otutu izu ka igwe aturu bia.
Okporo ámá jupụtara na akwụ́, n'okpuru mbara ihu. a na-ahụkwa ha ka ọ na-efegharị n’okporo ụzọ n’adịghị ka ilo nke anyị na-ahụkarị oge ọ bụla na mpaghara emeghe.
Bibliography na amaokwu
Ntuziaka nnụnụ. Spain, Europe na mpaghara Mediterenian. Lars Svensson
2 kwuru na "Common ụgbọelu (Delichon urbicum)"
June 4, 2019 na 12:10 am
na-atọ ụtọ nke ukwuu mana kedu ka m ga-esi mee ka ha pụọ ​​n’ụlọ m n’emebighị ha
June 4, 2019 na 4:11 elekere
Ọfọn, ị nwere ike. Tinye trare nke nsị ka ọ ghara inye gị nsogbu. Emelitere m ozi a na ozi a.
Iwepu akwụ akwụ bụ mpụ.
1 Otu esi amata ugbo elu
2 Kedu ihe ha na-eri
3 Otu esi zere imebi mbara ihu
4 Ofbọchị ịhụ ụzọ na Sagunto
5 Bibliography na amaokwu